प्रचण्डको गृहजिल्लामा बबाल, एकाएक प्रहरी परिचालन::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
प्रचण्डको गृहजिल्लामा बबाल, एकाएक प्रहरी परिचालन
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : शनिबार, बैशाख १४, २०७६
चितवन – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को गृहजिल्ला चितवनमा बबाल मच्चिएको छ ।
भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा एक बालकको मृत्यु भएपछि आक्रोशित आफन्तले तोडफोड गरेका छन् । चैत २९ गते ज्वरो आएको र पेट दुखेको भनेर अस्पताल भर्ना भएका गोरखा भुजेलका ९ बर्षीय बालका रुप्सन घिमिरेको शुक्रशार उपचारको क्रममा निधन भएको थियो ।
बालक घिमिरेको उपचारमा अस्पतालले गम्भीर लापरवाही गरेको भन्दै पीडितका आफन्त आन्दोलित बनेका छन् । पीडित पक्षले अस्पतालको मुल गेटमा तोडफोड गरेका छन् । स्थानीय प्रशासनले अस्पताल परिसरमा प्रहरी परिचालन गरेर सुरक्षा दिएको छ ।
मृतकका बाबु रुपेशले मेडिकल कलेजको गम्भीर लापरवाहीका कारणले छोरा गुमाउनुपरेको दुखेसो गरे । उनले भने, ‘बैशाख २ गतेसम्म मेरो छोरा मज्जासँग खेलिरहेको थियो । टाठो पनि थियो तर त्यही दिन सुइँ हाल्दाहाल्दै बच्चा बेहोस भयो । त्यसपछि भेन्टिलेटरमा राखियो र अब मेरो छोरा रहेन ।’
उनका अनुसार अस्पतालले ३ गते डिस्चार्ज गर्ने जानकारी दिएको थियो । तर २ गते अचेत भएपछि भेन्टिलेटरमा राखियो । १० गतेसम्म रुप्सनलाई सञ्चो हुुने आश्वासन दिएको मेडिकल कलेजले त्यसपछि भने बाच्ने नबाँच्ने भगवान भरोसा भएको बताउन थालेको रुपेश बताउँछन् ।
बैशाख १३ गते करीब ४ बजे बच्चाको मृत्यु भएपछि शव बुझ्न अस्पतालबाट फोन गरेको उनले बताए । ‘रातको साढे १० बजे अस्पतालबाट फोन आयो, छोराको मृत शरीर बुझ्नुपर्यो, हस्ताक्षर गर्न आउनुहोस् भनेर,’ उनले भने, ‘मैले बिहानसम्म अस्पतालमै राख्न आग्रह गरेको थिए तर बिहान आउँदा छोराको शव छैन । रातारात गायब गराइयो ।’
आफ्नो अनुमति बिना अस्पतालले रातारात छोराको शव गायव बनाएको आरोप रुपेशले अस्पताल माथि लगाएका छन् । बालकको शव भरतपुर अस्पतालको शवगृहमा राखिएको छ । बालकको मृत्यु भएपछि स्थानीय प्रशासनको रोहबरमा वार्ता पनि भयो । अस्पतालले उपचार खर्च व्यहोर्ने तर अन्य क्षतिपुर्ति नदिने अडान लिएपछि वार्ता निष्कर्षमा नपुगेको सहभागीले बताएका छन् ।
उपचारमा डा. सन्तोष पाठक र डा. शान्ति रेग्मीको टिम खटिएको थियो । चितवन मेडिकल कलेजका निर्देशक डा. दयाराम लम्सालले ज्वरो र छातीको संक्रमण भएर आएका बालकको निमोनियाका कारण निधन भएको दाबी गरे ।
उनले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका छन् । अस्पताल र आफन्तको अवस्था तनावग्रस्त रहेको छ ।